I-Oyoun idala indawo yengxoxo enobuzaza, ukubonakalisa uvavanyo kunye nokuqina. Ngombulelo kwiminikelo yawo eyahlukeneyo yenkcubeko, iOyoun sisisithuba senkcubeko kunye nemveliso yolwazi. Iziko lenkcubeko elingenzi nzuzo lizibona njengeqonga lamagcisa abonakalayo, umdlalo weqonga, uncwadi, umdaniso, umculo, nokunye okuninzi.
Ekuqaleni kuka-2020, inkcubeko ye-nonu-NeuDenken UG yathatha indawo ye-3500 m² yeziko lenkcubeko eWissmannstrasse 32, eBerlin Neukölln.
Kwi-Oyoun, ukunxibelelana sisiseko esiphambili sesikhokelo kunye nokuziqhelanisa nokuphila okunokufunyanwa kwinkqubo yobugcisa nenkcubeko. Kule nkqubo, iinyani ezahlukeneyo zobomi kunye neendlela zabo zobugcisa nenkcubeko ziyabonakala.
Queer * ubufazi
Nangona eli gama libandakanya ngokucacileyo abantu abathandanayo, liya ngaphaya kwezinto ezincinci endaweni yesazisi ngokwesini kunye nokuzibandakanya ngokwesondo. Ubufazi, egxile kulingano phakathi kwamadoda nabasetyhini, ngaphandle kwabalingane abangamanyala kwaye bayazihoya iingxaki ezinobuzaza, ezibandakanya ubuhlanga, ubuhlanga kunye nenkcubeko yobundlobongela.
Eli gama lakha isikhokelo esithathela ingqalelo isimilo senkqubo apho imigaqo-nkqubo yengcinezelo inefuthe kubomi babantu ababefudula bekolonjiwe. Ucela ukuba kwenziwe uphando kwiingxelo ezichasayo ezicinezelwe kwiinkqubo zobukoloniyali kwaye kugxilwe kumazwi nakumabali aba bantu bacinezelweyo kolu hlaziyo.
Umbono wokufuduka uqonda kwaye ubhiyozela izakhono, amandla kunye nokuzithemba kwamalungu oluntu olufudukayo, kubandakanya abafuna indawo yokubalekela kunye neembaleki. Sisebenzela ukuphakamisa amazwi kubafuduki kwaye siqinisekise ukumelwa kwabo kubugcisa, kwinkcubeko nakubomi boluntu.
Umsebenzi weOyoun wenziwa liqela elinenkcubeko-elinomdla, elinomnqamlezo kunye neqela elihlakulela ukukhula rhoqo.
Okwangoku akukho zithuba. Ukuba unomdla, thumela isicelo sakho ku imisebenzi@oyoun.de.
Iikherubhu * iLab
IiOritoun Curators * ILeb isebenza njengendawo yokudibana kunye nenjongo yokuchaza kwakhona ukophula ngelixa kuphuhliswa isigama kunye nobungcali bobugcisa.
I-lab isebenzisa amagcisa asahlumayo njengeqonga eliguqukayo kunye nethuba lokulinganisa kunye nokudala, ukujongana ngokupheleleyo nezinto zobugcisa kunye nokujonga ngokunzulu, ukubuza kunye nokuyonwabela inkqubo.
Sinomdla ngokukhethekileyo kwimveliso yokungaqhelekanga, evusa inkanuko, eyahlula-hlula, ekhawulezileyo kwaye sijonga imiba yezentlalo, ngelixa sihlala sikhuthaza ukuxoxa.
I-Oyoun ikhuthaza ukubonakala kokudibana kunye nokudlala indima ebalulekileyo (ubugcisa) kunye nokufowuna kobumbano ngokugqibeleleyo.
I-Oyoun ingaphezulu kwendawo yokuhlala. Yinqaba ezandleni zoluntu.
UMariane Michel aka Nane Kahle
UAdrian Marie Blount